Musumaasuqa Doorashada 2020/21 Maxaa ka Dhalan Kara? Akhriso | SMC
Home WARARKA MAANTA Musumaasuqa Doorashada 2020/21 Maxaa ka Dhalan Kara? Akhriso
Musumaasuqa Doorashada 2020/21 Maxaa ka Dhalan Kara? Akhriso
Sida muuqata dalku wuxuu halis ugu jiraa inuu dagaal sokeeye galo, kaas oo ka bilowda maamulka doorashada kadibna dib ugu baaha khaldaadkii faraha badnaa ee uu dalka ku hogaamiyey MW Farmajo, iyadoo ay dib u furfurmi doonaan bogihii iyo utinnadii laga dhaxlay hogaamintiisii kharribneyd, barlamanka oo dhamaantood aan wax dan ka galin iyo mucaaridka oo aan kala garaneyn meel ay u socdaan iyo meel ay ka socdaan.
Waxyaabaha kaa yaabina haddii aad dareen waddaniyadeed leedahay waxaa ka mid ah khaldaadka xanaf abuurka ee si ula kac loo galayo, iyadoo la og yahay inay yihiin gafaf Siyasaadeed.
Waxaa la magacaabay R/W aan weligiis siyaasad ka shaqeyn oo xataa aan feker ka haysan sida loo fahmo siyaasadda, arimaha bulshada, Amniga iyo diblomasiyadda waxaanu ahaa shakhsi iskiis u shaqeysta oo ah fundi shahaaddo haysta inkastoo la siiyo magaca la soo waariday oo ah Ingineer.
Ma ahayn shakhsi ku jiray dhaqdhaqaaqyada isbadal doonka ah dhinaca uu doono ha kaga jiree.
Dadka yaqaanaa waxay ku sheegaan maaha shakhsi dhib badan ama jecel iska hor imaaka iyo wajisaaarka runta oo ah wax aad loogu baahan yahay xelligaan oo lagu jiro marxalad aad u adag oo kala guur ah.
Banbaxa iyo Xereysi wasiiradda
Faham ahaan , RW Cusub in uusan wax feker ahba ka haysan dowladnimo waxaa u daliil ah, waxaa uu hadda geliyey golihiisa Wasiirada wax uu ugu yeeray Banbax oo ah inuu ku xareeyey hotel qaali ah oo ku yaalla garoonka dayuuradaha Xalane, waxaana ugu yaraan ku baxaya $300,000 tan oo magaalada loogu qeybin karay bacaha ay ka dugsadaan dhibaatooyinka roobka, dabeylaha dhaxanta wata iyo daadadka ka dhasahy oo qaaday reer caruur iyo haween u badan. Su’aalaha dadka siyaasadda yaqaannaa u soo boodaya waxaa ka mid ah Maxaa loogu baahan yaha in wasiirro la xareeyo xelligaan oo ay joogayaan muddo gaaban waayo:
Markii la so xulayey isaga sooma xulin mana yaqaannaba oo maalintii la dhaarinayey ayaa mid mid loo baray loona sheegay in uu hebel yahay wasiirkiisii arrimaha xxx.
Waxay joogayaan wasiiradaan haddii sida sharciga ah loo raaco muddo 95 maalmood ah oo ku eg 8-da Febraayo 2021.
Waxa kaliya ee laga rabaa waa inay ka shaqeeyaan doorashada iyo habsami u qabsoomideeda.
Guddiyada Doorashada iyo Xallinta khilaafaadka
Dhinaca kale waxaa uu RW Rooble magacaabay Guddiyo laba ah oo lagu kala sheegay Guddiga doorashooyinka iyo guddiga xallinta khilaafaadka. Runtii waa naxdin, ceeb, cabsi iyo taloxumo soo wajahday dalka waayo ragga iyo haweenkaan la magacaabay waa dhallinyaradii badankood u shaqeyneysay Maadaxweyne Farmajo oo qaarkood haddii aad dib uga baarto baraha bulshada waxaad soo heleysaaan inay ka mid ahaayeen kuwii caayi jiray ciddii dowladda u shaeegta khaladkeeda, waa kuwii amaanayey MW Farmajo amaanayey markii la dhiibayey Qalbi dhagax, markii la xasuuqayey shacbiga Baydhabo, markii Xamar jid waliba la xerayey, markii Cabdiraxman Cabdishakuur la weerarayey, Markii Cabdi Qeybdiida xaaskiisa Musqusha loogu galayey, markii labadii MW ee hore la rabay inay diyaaradda la basin beesho kadibna hawada ku ololsho, markii Galmudug la burburburinayey, Markii shacabka Jubbaland la cunaqabateynayey oo daawooyinka iyo raashinka laga joojinayey.
Haddaba sidee ayey dhaalinyaradaas oo uu hurmuud u yahay agaasimaga guud ee Xafiiska Madaxweynaha Cabdinuur Maxamed Axmed, loona wado inuu noqdo gudoomiyaha gudiga, loogu aamini karaa inay hogaamiyaan doorashada dalka oo uu (Madaxdiisa-his boss) uu musharax yahay? Sidee guddigan Xallinta khilaafaadka xal looga sugi karaa markii la soo xulay kuwii u doodi lahaa dowladda, kadibna go’aanka gacanta loogu gelin karaa- Markii aan kubadda cagta ku daawan jiray garoonkan Istadiyo Kooni ayaa waxaan maqli Garsoore Geeddow ka dacwoo oo Garsoore Geeddow u dacwoo maadama uu isaga isku ahaa kii khaldka galay kooxda ka eexday iyo kii loo dacwoonayey.
Aaway dadkii dalkaan lahaa ma waxaa la wada sugayaa maalinta qoryaha la isu qaato maa hadda laga horatgo:
Aawya mucaaridkii iyo dadka daneynaya inay dorashad ka qeyb galaan sidee ayey hadhow u murmi karaa marka guddiyadaan ay qabsadaan hawsha gaarka ah ee loo soo igmaday oo la ogyahay waxay tahay.
Maa hadda laga doodo, laga hadlo oo la saxo, maadaama aan cidna lagala tashan soo xulista guddiyadaan oo ay NN gacanteeda ku soo xulatay.
Musumaasuqa Doorashadan 2020/21 Maxaa ka Dhalan Kara?
SMC waxay ka digeysaa in aan hadda la fududeysan wax hadal lagu sixi karo inay dhaliyaan gacan ka hadal dhiig ku data oo ay dad badani ku barakacaan. Guddiyadan hadda ha la saxo, dibna ha loo magacaabo guddiga ay wada magacaabeen Saamileyda Siyasadeed ee dalka maadaama doorashada la wada galayo si loogu wada qanco natiijada ka soo baxaysa si looga fogaado qawaaciq xumada ka dhalata doorashooyinka la isku diido.
Next articleUganda oo Soomaaliya kala baxday 2,100 askari oo ka tirsanaa AMISOM